Ukufaka i-AI Ukwakha Iphrofayili Yokuthenga Ephelele Nokuletha Okuhlangenwe Nakho Okuqondene Nomuntu | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 19, 2021 NgoLwesibili, Januwari 19, 2021 UNate Burke
Amabhizinisi ahlala efuna izindlela zokwenza ngcono ukusebenza kahle nokusebenza ngempumelelo kwemisebenzi yabo. Futhi lokhu kuzoba ukugxila okubaluleke kakhulu njengoba siqhubeka nokuzula esimweni sokuhweba esiyinkimbinkimbi futhi esiguquguqukayo se-COVID.
Ngenhlanhla, i-ecommerce iyachuma. Ngokungafani nokuthengiswa ngokomzimba, okuthinteke kakhulu yimikhawulo yobhadane, ukuthengisa online kuyenyuka.
Ngesikhathi samaholide ka-2020, esivame ukuba yisikhathi esimatasa kakhulu sezitolo unyaka nonyaka, ukuthengiswa oku-inthanethi kwe-UK kukhuphuke ngama-44.8% cishe uhhafu (47.8%) wakho konke ukuthengisa okuthengiswayo okwenzeka ngezindlela ezikude.
I-BRC-KPMG yokuThengisa iMonitor
Ngokushintshwa okuhlala njalo kwedijithali, noma okungenani eyodwa ezobona amabhizinisi esebenzisa indlela ye-omnichannel ukuze azuze kokuhle kakhulu kuwo womabili la mazwe, okuningi kuzobheka izindlela zokunciphisa okungaba imikhuba engajwayelekile yebhizinisi ledijithali elisha, njengoba kanye nokunciphisa umthwalo omkhulu womsebenzi.
I-AI isivele inikela ngezixazululo zala maphuzu obuhlungu. Ngamathuba ayo wokuqoqa idatha kanye nezinketho ze-automation, kukhona ikhono lokunciphisa imisebenzi yezokuphatha nezinsizakusebenza ezilahlekile, ukonga amabhizinisi isikhathi nemali nokwakha umuzwa ongcono wamakhasimende ngenxa yalokho.
Kepha ku-2021, kunecala lokuthatha lesi sinyathelo esisodwa ukuqhubekela phambili. Manje njengoba sesazi izinzuzo ze-AI futhi singaqiniseka ukuthi ilapha ukuhlala, amabhizinisi kufanele abone ingozi encane kakhulu ethintekayo ngendlela edidiyelwe.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe nedatha etholakalayo ukwakha amaphrofayili wokuthenga ongcono, amafemu angawasebenzisa ngempela amandla we-AI namandla abo ukuze kuzuze bona.
Ukuqonda Okungcono Kwamakhasimende Akho
I-AI yaziwa ngekhono layo lokuqoqa idatha ukuze ikhombise futhi ibikezele ukuthambekela kwamakhasimende nezimakethe ngokuhlaziya izindlela zokuthenga, kanye nasemathonyeni kuzo zombili izindawo ezincane nezikhulu.
Umphumela uba isithombe esiphelele semakethe yakho engaqhubeka nokwazisa izinqumo zebhizinisi. Kepha njengoba ithuthuka, ikhwalithi nokusetshenziswa kwedatha ekwazi ukuyiqoqa nokuyihlaziya iye yaqhubekela phambili kakhulu.
Namuhla, futhi ngokuya phambili, idatha kanye nokuqonda kungasetshenziswa ukukhiqiza ukuqonda okunemininingwane nokunembile kwekhasimende ngalinye, kunamasegmenti wabathengi avamile. Isibonelo, ngokuqoqwa nokwamukelwa kwedatha yekhukhi lapho ikhasimende livakashela iwebhusayithi yakho, ungaqala ukwakha amaphrofayli abo, kufaka phakathi intshisekelo yomkhiqizo nokuncamelayo kokuphequlula.
Ngalolu lwazi olugcinwe ngokuphepha kumarekhodi akho, ungahlela okuqukethwe uma bevakashela ikhasi ukuze bakhe ulwazi lomuntu siqu noluthandekayo. Futhi uma kuvunyelwene nenqubomgomo yakho, ungasebenzisa lolu lwazi ukwenza izikhangiso eziqondisiwe nokuxhumana.
Manje, kunemibono eyehlukene ngokuziphatha kwalo mkhuba. Yize, ngemithetho eqinisa kanye nezinyathelo zokuhambisana, ukulawulwa kokuqoqwa kwedatha kuhlala kusezandleni zabathengi. Kulabo abemukelayo, kungumsebenzi womthengisi, futhi ngokuzuzisa kwabo, ukuthi bakusebenzise ngokuqonda.
Imvamisa, umthengi uzofuna ukuthi izinketho zakhe zokuphequlula zikhunjulwe. Kwenza kube nokuthenga okulula kakhulu futhi kubongele isikhathi sokusetha kabusha nokuhlunga kabusha izinketho. Empeleni:
Abathengi abangama-90% bazimisele ukwabelana ngemininingwane yokuziphatha komuntu nemikhiqizo ukuze kube lula. Ngakho-ke, umkhiqizo okwazi ukwenza lokhu uzobhekwa kahle kakhulu, ukhuthaze ukubuyela futhi ukuphinda ukuthenga.
Abangafuni, noma kunjalo, ukuthi ama-brand asebenzise kabi ulwazi aluphethe ngokulugaxela ngokuxhumana okungapheli nezikhangiso eziphokophelwe kabusha. Eqinisweni, lokhu kungalimaza idumela lomkhiqizo, kunokuba kulunikeze umusa.
Kepha imininingwane oyiqoqayo ingakusiza nawe ukubikezele lokho. Ungathola ukuthi yiluphi uhlobo lwezikhangiso oluphendulwa kakhulu yikhasimende ngalinye, futhi imininingwane ngisho nesikhathi esaphendulwa ngaso, ngaluphi uhlobo, kuluphi ucingo noma kusiteshi, isikhathi esingakanani, nokuthi ngabe empeleni sikhuthaze ukuchofoza noma ukuguqulwa.
Lolu lwazi lubaluleke kakhulu ekwakheni amaphrofayli okuthenga. Ngayo, ungakha imikhankaso neminikelo ephumelela kakhulu njengoba unikeza amakhasimende akho lokho akufunayo.
Futhi ngenkathi edlule, amaphrofayli ngamanye ayevame ukuqoqwa abe yizigaba ngokufana, amakhono okuzenzekelayo wezinhlelo ezihlanganisiwe ze-AI asho ukuthi wonke umthengi ngamunye anganikezwa ulwazi lomuntu siqu nolwenzelwe bona.
Impumelelo nemiphumela yokuthengisa iyazikhulumela. Okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho sekuvele kuthola izilinganiso zokuzibandakanya ezingcono kunezinye izindlela ezivamile:
Ama-imeyili enziwe uqobo angafinyelela ekukhuphukeni okungama-55% ngamanani avulekile.
Ama-91% wabathengi maningi amathuba okuthi bathenge ngemikhiqizo enikezela ngeminikelo efanele kanye nezincomo.
Ucwaningo lwe-Accenture Pulse
Manje, cabanga nje ukuthi ingaphumelela kangakanani le misebenzi uma sithatha isinyathelo sokukhomba phambili futhi sazisa izinqumo zethu ngolwazi esiluqoqe ngentuthuko ye-AI, ukuze sakhe amaphrofayli wokuthenga anemininingwane futhi anembile.
Ngokwami, ngikholwa ukuthi yithuba elingaphuthelwa.
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukuthenga ama-personasi-covid-19ecommerce personai-forresterisikhathi seholideukuthenga umuntu nge-inthanethii-post-covidukuthengisauk ukuthengisa online
UNate Burke wasungula iDiginius ngo-2011. Waziwa njengephayona lokuqala le-e-commerce nosomabhizinisi. Usungule ibhizinisi lakhe lokuqala le-inthanethi ngo-1997 futhi uqokwa amahlandla amabili u-Ernst & Young Entrepreneur Wonyaka. Une-BA kwi-Computer Science ne-MBA evela e-University of Alabama.